Cazorla Iyo Van Persie Oo Ka Mid Ah Kooxda Arsenal Ee U Safartay Jarmalka - jornalizem
Cazorla Iyo Van Persie Oo Ka Mid Ah Kooxda Arsenal Ee U Safartay Jarmalka
Santi Cazorla ayaa u raacay dalka Jarmalka kooxda Arsenal iyadoo aan weli la soo dhamaystirin heshiiska £16.5million ee uu ugu wareegayo Arsenal.
Kooxda Malaga ayaa fasax gaar ah siisey Gunners isniintii si uu Cazorla ugaga mid noqdo kooxda tababarka ku qaadanayso meel u dhow Cologne iyadoo aan weli la faahfaahin heshiiska labada koox.
Ku wareegidiidsa Arsenal ayaa laacibkan waxaa dib u dhigtey iyadoo kooxda ka dhisan dalka Spain ay xalinayso arrimaha maaliyada ee haysta waxana la filayaa in 27 jirkan uu dhowaan soo gabagaboobo u wareegidiisa Arsenal.
Waxana lagu wadaa in Cazorla kulanka ugu horeeya ee uu u safto Arsenal uu noqdo kulanka saaxibtinimo ee maalinta Axada ay la yeelanayso Cologne waxaana kulankaas sidoo kale safan doona ciyaaryahanada dhowaan ku soo biirey Arsenal ee Lukas Podolski iyo Olivier Giroud.
Robin van Persie oo aan weli u safan Arsenal tan iyo markii uu ku dhowaaqay in uu qorsheynayo in uu isaga tago kooxda ayaa ka mid ahaa 24ka ciyaaryahan ee kooxda Arsenal u duushay dalka Jarmalka.
Nicklas Bendtner iyo Sebastian Squillaci ayaan ka mid ahayn safarkaas. Aaron Ramsey ayaa la siiyey fasax kadib markii uu ka soo laabtay tartanka Olympicska oo uu ka mid ahaa xulkii Great Britain oo lagu soo reebay siddeed dhamadka.